Bluedio TN ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်ပေါက်ဈေး ...
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများမိုဘိုင်းအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများTN Bluedio ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်
စျေးနှုန်းသမိုင်း TN သံလိုက် Bluedio Bluetooth ကိုနားကြပ်
€ 12,71 - 2019 12 နိုဝင်ဘာလ
€ 14,86 - 2019 25 သြဂုတ်လ
€ 14,43 - 2019 14 သြဂုတ်လ
မှ: သြဂုတ်လ 2019, 14
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 14,86 - 2019 25 သြဂုတ်လ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 12,71 - 2019 12 နိုဝင်ဘာလ
Bluedio TN သံလိုက်ဘလူးတုသ်နားကြပ်
မိုက်ကရိုဖုန်းက Black Dual-နှင့်အတူ TN Bluedio Bluetooth ကိုနားကြပ်
မိုက်ကရိုဖုန်းအပြာရောင် Dual-နှင့်အတူ TN Bluedio Bluetooth ကိုနားကြပ်
မိုက်ကရိုဖုန်း Dual-အဝါရောင်နှင့်အတူ TN Bluedio Bluetooth ကိုနားကြပ်
Dual-မိုက္ကရိုဖုန်းနှင့်အတူသံလိုက် HiFi ဘလူးတုသ်နားကြပ်နားကြပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး Bluedio TN Active ကိုဆူညံသံ
မိုက်ကရိုဖုန်းကို BT နှင့်အတူ Bluedio TN ANC က Active ကိုဆူညံသံကိုဖျက်သိမ်းပြီးနားကြပ်
နား Bluedio ကြိုးမဲ့ / Bluetooth ကိုနားကြပ် Dynamic ပလတ်စတစ် 4.2 အားကစား & Fitness နားကြပ်ခုနှစ်တွင် TN ...
headphone Bluedio T ကစွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း! $ 25.00 အကောင်းဆုံးပါပဲ!
TN တာဘိုင် Bluedio Bluetooth ကိုနားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: TN Bluedio ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်
1, နားကြပ်၏ Pair ကို, 1 က x Type-C Cable ကို x3Eartips ၏ Pair ကို x, 1 အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x
TN Bluedio ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ9ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း TN Bluedio ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်
Aswin - 2019 10 ဇွန်
အဆိုပါနားကြပ်နား၌ snugly fit နှင့်လွယ်ကူစွာချွတ်လဲကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါမထိုက်မတန်သည်အတွင်းသဘောလုပ်ကွက်အသံဗလံအများစု။ မြေတပြင်လုံးအရာစူပါအလင်းဖြစ်၏နှငျ့သငျမှာအားလုံးလည်ပင်းတစ်ဝိုက်ကမခံစားရဘူး။ ငါယခုတိုင်အောင်ယခုတစ်လအသုံးပြုခဲ့ကြနှင့်မည်သည့်ဒါမှမဟုတ်ကိုနှိပ်ပါ Jitter ကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်။ အင်္ဂါရပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတက်ကြွစွာဆူညံသံလျောက်ပတ်နှင့်ဆူညံသံအများစု muffles ။ ဒါဟာကြင်နာ၏ရေအောက်နဲ့တူခံစားရ၏။ ဒါဟာ hum နှင့်မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာနှင့်တူပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဆဲလူတွေစတာတွေ Beep, ဦးချိုပြောနေတာကိုနားထောငျမယ်လို့ ပါဝါပိတ်ထားသည်တောင်မှအခါ ANC ကအင်္ဂါရပ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင့်မိုဘိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ, သင်ဖုန်းခေါ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းဘယ်ဟာမှအအရေအတွက်ကိုကြေညာနောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့ရယူပါ။ ဘက်ထရီ output ကိုလျောက်ပတ်သည်နှင့်2အလွယ်တကူမိုးသည်းထန်စွာသုံးအလယ်အလတ်နှင့်အတူနေ့ရက်ကာလအဘို့ကြာရှည်ခံသည်။ USB မှတ် typeC တို့သည်ကြီးစွာသော option ကို။ (ပေး cable ကို) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်လုံးဝအားသွင်းပေးပါတယ်။ ဒါဟာအကြီးဝယ်ပါတယ်။ အဆိုပါနားကြပ်သည်အလွန်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါက wierd ဝဲ၌တည်ရှိ၏ဘယ်ဟာ် / ပိတ်ပါဝါအဘို့အနောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့, ဘလူးတုသ်ကွန်နက်ရှင် / အဆက်ဖြုတ်စတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုမပိတ်နိုင်ပါ။ တစ်ဦးအဝင်ခေါ်ဆိုမှု (In-built အင်္ဂါရပ်) စဉ်အတွင်းဖုန်းနံပါတ်ကြေညာတောင်မှသောအခါ, အရေအတွက်ကိုဖတ်နှင့်အိမ်ကအရမ်းအသုံးဝင်မအောင်ကိုဆက်သွယ်ဘူး။ စိတျအပိုငျးအများစုမှာနားကြပ်အတွက်မှာ chrome အစိတ်အပိုင်းများတူသောအပါအဝင်ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။ ဘက်ထရီအနိမ့်ဖြစ်တဲ့အခါ, အလွန်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာအနိမ့်ကျထရီကြေညာချက်နီးပါးချက်ချင်းပင်ပိတျထား device ကိုလည်းမရှိ။ သငျသညျတဖနျပေါ်မှာလှည့်ကြိုးစားကြည့်ရင်တောင်အပိုအချိန်မရှိပါ။ အဆိုပါ ANC ကအင်္ဂါရပ်အမှားအားဖြင့်ပေါ်ကျန်ရစ်လျှင်, ဘက်ထရီ drains ။ ဒါပေမယ့်တက် Sum ငှါ, cons ကျော်အပြစ်တွေအနိုင်ရ။ ဒါဟာအကြီးဝယ်ပါတယ်။
ATC - 2019 10 ဇွန်
ငါအဲဒီနားကြပ်ကိုဝယ်ယူသည့်အခါကအလွန်နိမ့်နှင့်အတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာရောင်းချခဲ့လျက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်အကြောင်းကိုနှစ်ရက်အဲဒီနားကြပ်ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်, ငါအဲဒီနားကြပ်၏သွားလာရင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မည်မဟုတ်ပါပြောနိုင်ကတည်းကငါအများကြီးမျှော်လင့်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဤရွေ့ကားနားကြပ်ကိုငါ့နေ့စဉ်နားကြပ်အတိုင်းဤသုံးပြီးပေါ်မှာငါ့ကိုချိတ်ပါဒါက key ကို features တွေအများကြီးကိုဆက်ကပ်, သော့ကိုအင်္ဂါရပ်များတ Active ကိုဆူညံသံ Cancellation ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအဲဒီ feature အဆိုပါ ANC က Bluedio ငါကြိုးစားခဲ့ကြသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်တွေအများကြီးထက်သာလွန်သည်။ အဆိုပါစိတ်ဓာတ်, mids, မြင့်သည်နိမ့်ဆုံးကိုဘေ့ကယ့်ကိုလျောက်ပတ်သည်။ သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာနားကိုနားကြပ်အတွက် UBeats Beats မှနှိုင်းယှဉ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါ mids နှင့်မြင့်မားသော, အလွန်ကောင်းစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသံ, ရှင်းလင်းသောအသံ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတူရိယာဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မသဘောကျတယ်အခြားအင်္ဂါရပ်ငါ့အဘို့ preference ကိုပိုပြီးလည်းရှိတယ်, ထိုသံလိုက် earbuds ကောင်းတစ်ဦးခေါ်ဆိုခခဲ့သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာပဲနှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်းနှင့်အတူတူသူတို့ကိုရွေ့လျားခြင်းဖြင့်ပယ်ကျသွားမရှိဘဲသင်၏ earbuds သူတို့ကိုလုံခြုံဖို့ကအဆင်ပြေစေသည်။ ပထမတော့ငါသံလိုက်အမှန်တကယ် earbuds မိမိတို့ကိုယ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မယ်လို့ထင်ပေမယ့်အသုံးပြုတဲ့အပတ်ကအပြီး, ငါသည်အဘယ်သူမျှမအသံပြောင်းလဲမှုနားကြပ်ဖို့ကြပြီ, သူတို့ကနေဆဲငါကသူတို့ကိုဝယ်နေ့ကိုအဖြစ်နည်းတူကောင်းသောအသံလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံးကခံစားရတစ်ချိန်က Neckband တော်တော်လေးခိုင်မာသောဟန်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီသင်သည်သင်၏လည်ပင်း၌ပြုလုပ်ထားအဖြစ်သူတို့ကပင်သိသာသည်မဟုတ်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုတကယ်အလင်းအလေးချိန်ဖြစ်ပြီး, တီးဝိုင်းအတွင်းသဘောပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ရော်ဘာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်အများအားဖြင့် Neckband earbuds နှင့်အတူ get ချွေးဒါက Buildup ကိုလျှော့ချပါ။ ငါကပိုကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်အောင်က finish ကိုတစ်ကောင်းတဲ့ဆိုရင်တော့ Matte အမျိုးအစားရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားငါရိုးသားစွာတစ်ခုအံ့သြဖွယ် price.PROS အဘို့ကြီးစွာသောဘလူးတုသ်နားကြပ်ရဖို့ရှာဖွေနေထွက်ရှိမည်သူမဆိုဤထုတ်ကုန်အကြံပြုမယ်လို့။ တိကျ Punchy အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ကောင်းမွန်သော mids နှင့်စိတ်ဓာတ်နှင့်အတူ * Excellent ကအသံက * လွယ်ကူတွဲဖက်မှု Bluetooth မှတဆင့် * တည်ငြိမ်သောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှု။ ။ အဘယ်အရာကိုမျှများများစားစားအသုံးပြုမှုနှစ်ရက်အကြာတွင်တွေ့ရှိရ! ဒါကြောင့်နှစ်ဦးကိုတစ်နှစ်ကြာလျှင်ဒီစျေးနှုန်းမှာကွီးစှာသောထုတ်ကုန်လိမ့်မယ်!
TechGuru - 2019 10 ဇွန်
သငျသညျအများစုကဒီကိုဖတ်ရှုခြင်းကဲ့သို့ပင်, ငါအွန်လိုင်းတရုတ်လက်လီကုမ္ပဏီများ၏နယ်ပယ်ကမ္ဘာနှင့်အလွန်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်၏။ အချိန်အများစုမှာငါပေးပို့ဘို့ကြာကြာစောင့်ဆိုင်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်နေကြပြီးအဲဒီလူသိများအမှတ်တံဆိပ်အမည်များရှာဖွေရေးအတွက်ဖြစ်၏။ Tačiauတိုင်းတခါခဏ၌ငါတစ်ခုထွန်းသစ်စသို့မဟုတ်အမည်မသိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်နည်းပညာအပေါ်တစ်ဦးကျဆင်းယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ထိုခဏခြင်းတွင်သံသယရှိသူခြင်းမရှိဘဲ, ငါဒီတော့အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအရနိုင်အံ့သြခဲ့ပါတယ်ဒါကခံစားရဘယ်မှာသူများသည်အချိန်တစ်ခုမှာမယ်လို့ Is ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဒီနည်းကိုစျေးပေါခွင့်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလဲ WRONG.The သည့်နားကြပ်၏အရည်အသွေးတည်ဆောက်ဘာမျှကို Sony, Beats နဲ့ Jay Bird.They ကဲ့သို့အဓိကအမှတ်တံဆိပ်အလွန်လုံခြုံဒါကငါ့နားထဲမှာတစ်ခုနီးပါးထုံးစံမထိုက်မတန်ရှိသည်အဖြစ်နည်းတူကောင်းသောကြောင့် ။ ဤသည်ကိုငါ့ထရီဘယ်လ်, ဘေ့စစကားကိုနားထောငျဖို့အတှကျ (ဘေ့အပေါ်အလေးပေး!) ကခွင့်ပြုသည်နှင့်စတူဒီယို quality.I'm နှင့်အတူသီချင်းစာသားအဘယ်သူမျှမ audiophile ဒါပေမယ့်ဘလူးတုသ်များအတွက်အသံအရည်အသွေး amazing.Extremely ရှည်လျားဘက်ထရီအသက်ပေတည်း။ ငါတက်ကြွစွာဆူညံသံဖျက်သိမ်းခြင်းကို အသုံးပြု. တစ်ပြိုင်နက်စဉ်အားသွင်းစရာမလိုဘဲ box ကိုထဲက2ရက်ပေါင်းသူတို့ကိုများအတွက် အသုံးပြု. ပါပြီ။ ဒါဟာ $ 15 earbuds တက်ကြွဆူညံသံ Cancel ရှိပေမယ့်ဒီနေရာမှာငါတို့သည်သင်ပိုမိုပေးဆောင်နည်းရတဲ့ငြီးငွေ့နေ are.If မျှထပ်မံကြည့်ရှုဒါကငါ့အစိတ်ကိုမှုတ်! ကျွန်မစဉ်းစားနိုင်မှသာဖြစ်နိုင်ပါ con သင်နားကြပ်တွဲဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်ဒါဟာအင်္ဂလိပ်စကားသံကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုဝဲနှင့်အအေးနှစ်မျိုးလုံးနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့တူအသံဖြစ်ပါသည်
Xiaomi က Mi နာယက Bluetooth ကိုအသံချဲ့စက် 4.0
Xiaomi ကပါဝါဘဏ် 20000mAh